တောင်ငူပြည်ခိုင်းဖြိုးနှင့် အော်ပီကျယ်၊ မောင်သာချို။ ဦးဘုန်း(ဓာတု) အပါအ၀င်ရဲရဲတောက်စာရေးဆရာ ၁၀ ဦး ရဲ.စာပေဟောပြောပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တောင်ငူပြည်ခိုင်းဖြိုးနှင့် အော်ပီကျယ်၊ မောင်သာချို။ ဦးဘုန်း(ဓာတု) အပါအ၀င်ရဲရဲတောက်စာရေးဆရာ ၁၀ ဦး ရဲ.စာပေဟောပြောပွဲ
တောင်ငူပြည်ခိုင်းဖြိုးနှင့် အော်ပီကျယ်၊ မောင်သာချို။ ဦးဘုန်း(ဓာတု) အပါအ၀င်ရဲရဲတောက်စာရေးဆရာ ၁၀ ဦး ရဲ.စာပေဟောပြောပွဲ
Posted by tunlinaung on Jan 15, 2012 in Copy/Paste | 23 comments
တောင်ငူပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် အော်ပီကျယ်၊ မောင်သာချို၊ ဦီးဘုန်း(ဓာတု) အပါအ၀င်စာရေးဆရာ(၁၀)ဦး ၏ စာပေဟောပြောပွဲကြီး
တောင်ငူမြို. မိုင်ဒါအားကစားကွင်းကြီးတွင် ဇန်န၀ါရီလ(၂၆)ရက်နေ. မှ(၃၀)ရက်နေ. အထိကျင်းပမည် ဟုကြေငြာထားပါတယ်။ တောင်ငူမြို.ခံများနှင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ မထင်မှတ်လောက်အောင်
အံ့အားသင့်ပြီး ၀ိရောဓိများစွာ ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ထာဝရဂရုဏာရှင်စုပေါင်း သွေးလှုရှင်များအဖွဲ. နှင့်
တောင်ငူကာတွန်းဆရာများ ကျင်းပသောစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်နှင့်စာပေဟောပြောပွဲ လို.
ကြေငြာထားပါတယ်။ စာပေဟောပြောပွဲတွင်ပါဝင် သောစာရေးဆရာစာရင်းမှာ ကြေငြာစာရွက်အရ (၂၆)ရက်နေ.မှာ ဆရာဟိန်းလတ်နှင့် ဆရာမသန်းမြင့်အောင်။
(၂၇)ရက်နေ.မှာဆရာမောင်သာချို နှင့်ဆရာ မောင်ဝံသ ။
(၂၉)ရက်နေ.မှာတော့ ဆရာကျော်ရင်မြင့်နှင့် ဆရာအော်ပီကျယ်ပါတဲ့ဗျာ။
နောက်ဆုံ.နေ. (၃၀)၇က်နေ.မှာ ပြည်သူခေတ်က ကျနော်တို.ရဲ.
ဆရာဖေမြင့်နှင့် ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ် တဲ့ ဗျာ။။
………… ကဲ… ကဲ…..တောင်ငူသားတွေမှ စိတ်ရှုပ် မသွားရင်၊
တောင်ငူသား တွေမှ ၀ိရောဓိ မဖြစ်ရင် ၊
ဒီပွဲကိုဦးစီးကျင်းပတဲ.အဖွဲ့ဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကဖြစ်နေလို.ပါပဲဗျာ။ ဟောမည့် ပြောမည့်
စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာ ။ ဖြစ်နိုင်စရာရှိပါသလားလို.လေ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ကိုယ့်ဆရာတွေ ၂၀၁၂မှာ အတွေးအခေါ်တွေပြောင်းသွားတာများလား။
(ထာဝရဂရုဏာရှင်စုပေါင်း သွေးလှုရှင်များအဖွဲသည်ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အသင်း ဖြစ်ပါတယ်)
ဆရာအော်ပီကျယ် ၊ ဆရာဖေမြင့် ၊ ဆရာမောင်ဝံသ ၊ ဦးဘုန်းတို.လိုဆရာမျိုးတွေပါ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ. စင်မြင့်ပေါ်မှာ ဒီဆရာတွေဟောမယ်ဆိုတာ ကြားသိသူမှန်သမျှ ကို
တောင်ငူမှာလာဟောတဲ့ဆရာတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။တောင်ငူစာဖတ်ပရိတ်သတ်အနေနဲ.ကော စာဖတ်သူတွေအနေနဲ.ကောပါ။ ဒါပေမယ့် ………………….
စာရေးဆရာနှင့်တောင်ငူကြားမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရပါမယ်။ (၁)စာရေးဆရာတွေကိုမည်သူကတာဝန်ယူ ဖိတ်ကြားပါလဲ။
(၄)စာရေးဆရာတွေပြည်ခိုင်ဖြိုးပွဲဆိုတာသိပါသလား။ ( တောင်ငူကစာဖတ်သူအများစုကတော့ ဆရာတို. မသိလို. ဟောမယ်လို. ထင်နေပါတယ် )
တစ်နည်းအားဖြင့် စာရေးဆရာတွေနဲ.တောင်ငူကြားမှာမည်သည့် အထင်လွဲမှုမျိုးမှမရှိစေချင်တာပါ။
အကယ်လို.များ စာရေးဆရာတွေ မည်သို.ပွဲမျိူးဆိုတာ အသိမပေဘဲ မနှစ်ကလို ပွဲလိုထင်ယောင်ထင်မှား
ဖြင့်ဖိတ်ကြားခဲ့ရင် ဖိတ်ကြားသူများနှင့် စီစဉ်သူများ၏ အကြံဥာဏ်သာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ငူနှင့်လားလား
သက်ဆိုင်ပါ။ ( ဒီပွဲသတင်းကို တောင်ငူသတင်းထောက်တွေ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပွဲဆိုတာ သိပါလျက်နဲ.
စာနယ်ဇင်းတွင် ဘာကြောင့် အသိမပေးပါ သလဲ။)
သိပါတယ်။ငါတို.( စာရေးဆရာများ ) ကဖြင့် တူတာလေးတွေတွဲလုပ်ကြတာဟေ့ဆိုရင်လည်း
ဆရာများကို အမှန်တရားတခုကိုတောင်ငူကဖြင့်သိကြားစေပါတယ်။ ။( စပါးလှန်းထားတာမြင်လို. ဆန်းချေးလိုက်ကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့်လည်း တပည်.တော်တို.လည်းမလျှောက်တက်ပါကြောင်း)
( ခွင့်လွှတ်လို.တော့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် မေ့လို.တော့မရပါဘူးတဲ. ။ မင်ဒဲလားပြောတာပါ)
ဖြင့်ဖိတ်ကြားခဲ့ရင် ဖိတ်ကြားသူများနှင့် စီစဉ်သူများ၏ အကြံဥာဏ်သာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ငူနှင့်လားလား မှသက်ဆိုင်ပါ။
( ဒီပွဲသတင်းကို တောင်ငူသတင်းထောက်တွေ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပွဲဆိုတာ သိပါလျက်နဲ.
သူတို့လုပ်တဲ့ပွဲမှာ ငြင်းရင်လည်း သဘောထားမကြီး ရာကျမယ်။ ဒီတော့စင်ပေါ်တက်ပြီး သူတို့
အစ်ကိုရေ စာပေဟောပြောပွဲ တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်. ဘယ်သူတွေ ဦးဆောင်တာ မဦးဆောင်တာ အဓိကမကျဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်. စာရေးဆရာတွေကလည်း သူတို့ဖိတ်လို့မလိုက်ဘူးဆို ဘယ်ကောင်းမလဲ။ အဖွဲ့တိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့သူပါသလို မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါမှာပဲ။ ခွဲပြီးကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ (ဆရာလုပ်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါ) အကောင်းဆုံးက မနှစ်ကလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်. စာရင်းဇယားတိတိကျကျ ရှင်းလင်းနိုင်အောင်အထိ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်..
အဘ မင်ပြောသလို လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်
ထွန်းလင်းအောင်ရေးတာက ၁။ စာရေးဆရာတွေကိုညာဖိတ်တယ်။ ၂။ ပွဲလန့်တုန်းဖျာ
မခင်းစေချင်တာ ၃။ သူတပါးစိုက်ထားတဲ့အပင်ကို အချောင်မယူစေချင်တာ ၄။တောင်ငူသား တစု
လက်ချက်သာဖြစ်ကြောင်းသိစေချင်တာ ၅ ။တောင်ငူသတင်းထောက်တွေ တာဝန်မကင်းကြောင်း
သိစေချင်တာပါ။ စာပေဟောပြောပွဲကိုသူလည်းထောက်ခံထားပါတယ်။ စာကိုသေချာစွာဖတ်စေ
မတူညီတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးနဲ့ မန့် ချင်လာတယ်ဗျာ
ပြည်ခိုင်ဖြိုး အဖွဲ့ က ဘာမှ လုပ်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုတဲ့သဘောလား ဗျ ။
ခေတ်အပြောင်း စနစ်အပြောင်း ၊ နိုင်ငံတော် နဲ့ အမျိုးသားတစ်ရပ်လုံး ပြန်လည်ထူထောင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ၊ အတိတ်ဟောင်းတွေ ကို မေ့ပစ်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလားဗျ ။
ကျွန်တော် သည် မည်သည့်အဖွဲ့ ဝင်မှ မဟုတ်ပါ ။ သည်ပို့ စ် ကို ဖတ်အပြီး ၊ တွေးမိသည် ကို မန့် လိုက်ပါသည် ။
ကိုမောင်ပေ ရေ။ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ခွင့်လွှတ်သင့်သူကိုတော့ ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ်။
တကယ်ကိုအောက်က ပါတီဝင်တွေဟာ မှိုင်းလုံးမိပြီး အခွင့်အရေး ရလိုရညား လက်စွမ်းပြ
ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဒါပေမယ့် တကယ်ကို အပြစ်ရှိသူတွေက တော့ အထက်က
အာဏာရူးသူတောင်းစားတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ခုလို စာပေဟောပြောပွဲက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ကဦးဆောင်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့အတွက်လဲ ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့…စာရေးဆရာတွေဆိုတာ ပြည်သူတွေကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားတဲ့သူတွေ၊ပြည်သူတွေကလေးစားကြည်ညိုတဲ့သူတွေ သူတို့ကဘယ်အဖွဲ့ကပဲဖိတ်ဖိတ် ပြည်သူတွေအတွက်သူတို့က လာရမှာပဲလေ…
အရေးကြီးတာက …ပြည်သူတွေကို သူတို့တွေက တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ သူတို့ရဲ့အနုပညာခံစားချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊အတွေးအခေါ်တွေပါပဲ…ဘာတွေကို ပြည်သူတွေအတွက်ပေးခဲ့တာလည်း၊ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကိုဘာတွေထည့်ပေးလိုက်နိုင်တာလည်း….အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်…ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်က ခေါင်းစဉ်ထက်…သူတို့ဟောပြောချက်က ပြည်သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်…
ဆရာကျာ်ဝင်းရေးတဲ့ အငြင်းသန်တဲ့ မဇ္ဈိမသား စာအုပ်ကိုရှာဖတ်ကြစေချင်တယ်ဗျာ…
ပြည်ခိုင်ဖြိုးလို့အများခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်အများစု(အကုန်လုံးမဆိုလို၊အကုန်လုံးနီးပါး)ဟာ ကိုယ်ကောင်းစားရေးဝါဒ ဘယ်သူသေသေငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ အတ္တသမားတွေပါ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲနီးလာလို့ စည်းရုံးတဲ့သဘောများလား
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအော်ပီကျယ်၊ မောင်သာချို။ ဦးဘုန်း(ဓာတု) အပါအ၀င်ရဲရဲတောက်စာရေးဆရာဘာလဲ…ဘယ်လဲ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြည့်ယခင်ထက်သာတဲ့ တိုးတက်မှုတခု လို့မြင်ပါတယ်။ စာပေဟောပြောပွဲတွေလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်လာတာ တိုးတက်မှုတခုလို့မြင်ပါတယ်။
အမြင်မှားတဲ့အချိန် မှားခဲ့ကြတာတွေကို မေ့သင့်ပါတယ် ရဲဘော်တို့ရယ်…… လမ်းမှန်ဘက်ကို ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လုပ် လက်ခံကြည့်ပါအုံး။ လမ်းမှန်ကိုသွားနေတာကို တားလိုက်ရင် သူနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့ပဲရှိတယ်ဗျာ……. ပေးလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ….. ကိုထွန်းလင်းအောင်ရေ အဲဒီပွဲလေးပြီးဆုံးခဲ့ရင် သူတို့လုပ်ရပ်တွေကို MG မှာပဲဆက်တင်ပေးပါအုံးဗျာ…. ဒီနေရာက comments ကိုတွေကိုဆက်ကြည့်ချင်လို့ပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ဒီခေါင်းစဉ်အတိုင်းအပိုဒ်ခွဲလေးနဲ့တင်ပေးရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျာ…….
ငါတို့ဆီမှာတော့ 2011 ဘာစာပေဟောပြောပွဲမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး…။ ချိတ်ချိုးစရာတောင်နေဘီ
ဘယ်သူ ဦးစီးလို့ ဘယ်လိုဖြစ်တာဆိုတာ ခေါင်းထဲ ထည့်စဉ်းစားဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့ကရော သူတို့ဦးစီးပြီး သူတို့အကြောင်း အကောင်းပြောပါလို့ စာရေးဆရာတွေကို ပြောခဲ့ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့က မည်သူ့နာမည်ခံတွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လို့ လာကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားမနေပါနဲ့ အဓိက ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်နယ်မှာ စာပေဟောပြောပွဲ ကိုယ်မလုပ်နိုင်လို့ သူများ ဦးဆောင်တာကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေ ခဏမေ့လိုက်။ သူတို့လည်း လမ်းကြောင်းပြောင်းရင် ကိုယ်လည်း ဘာလို့ လက်တွဲမခေါ်ရဲကြတာလဲ.. အတူတူသွားမှ လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်မှာပေါ့။ ငယ်တုန်းကလို သူက ငါနဲ့မတည့်ဘူး။ သူ့ကို နင်လည်းမခေါ်နဲ့ဆိုသလို ကလေးကစားကြတဲ့အရွယ်တွေလည်း မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ ကိုယ်တောင် နေ့ည ရှိဦးမှာလား သေမလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ကြဘူး။ တရားသဘောနဲ့ ဆင်ခြင်ရင် အားလုံးက ဖြစ်ပျက် သဘောတရားပါပဲ။ နောင်အနာဂတ်ကောင်းဖို့ပဲ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ (ကျွန်မလို ဘာမှမသိတဲ့သူ ဆရာလုပ်တယ်လို့လည်းမထင်စေချင်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ ပိန်းနေတဲ့စိတ်လေးနဲ့ ၀င်ပြောကြည့်တာပါ။ ဘာဘာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေရှင်)
သများအားပေးထားတာလေး ဖျက်လိုက်သလားလို့ စဉ်းစားနေတာ…
ဘယ်ဟာက အဓိကလဲ ???
ဘာတွေပြောမလဲဆိုတာ အခွေထွက်မှပဲ သိရတော့မယ်ထင်တယ်
ဒီ ဆရာတွေဟာ ကျတ်ဖွတ် ရေးပေးတဲ့စာ အတိုင်းဖတ်ပြမယ်လို့မထင်ပါဘူး ဖတ်ပြရင် သူတို့သမိုင်းပျက်ပြီ